အိတ်ဆောင်မရှိမဖြစ်ရေနံ Ultrasonic မြူခိုး Humidifier China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:အိတ်ဆောင်မြူခိုး Humidifier,အိတ်ဆောင် Ultrasonic Humidifier,မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Ultrasonic Humidifier
Home > ထုတ်ကုန်များ > မူလစာမျက်နှာ Humidifier > အိတ်ဆောင်မရှိမဖြစ်ရေနံ Ultrasonic မြူခိုး Humidifier
အိတ်ဆောင်မရှိမဖြစ်ရေနံ Ultrasonic မြူခိုး Humidifier
AN မျက်မှန်ပျံ့အနုပညာလက်ရာများ: အဆိုပါအလှဆင်ပုံစံလက်ဖြစ်သည်နှင့်မြင့်မားသော temperture မှာ calcining ကဖွဲ့စည်း, ဒါကြောင့်တောက်ပနှင့်တောက်ပနှင့်သာမန်ဖန်ခွက်ထက်အစွမ်းရှိ၏။ အနံ့ပျံ့သင့်အိမ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်, သင်၏မိတ်ဆွေများများအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခု။
ပျော့ပျောင်းနှင့်တောက်ပတဲ့အလင်း: အဆိုပါအလင်းတစ်ဦးတည်းကိုအသုံးပြုများနှင့်ပျော့ပျောင်းနှင့်တောက်ပမော်ဒယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ Glass ကို humidifier သင့်အိမ်တစ်စုံလင်သောညဥ့်အလင်းဖြစ်၏။
INTERMITENT ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် AUTO Shut-OFF: တစ်ချိန်ကစာနယ်ဇင်း 30-စက္ကကြားကာလမှာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအခိုးအငွေ့အပေါ်ကိုဖွင့်ဖို့နှစ်ကြိမ်, ဆက်တိုက်အခိုးအငွေ့အပေါ်စာနယ်ဇင်းကိုဖွင့်ရန်။ ရေနီးပါးထွက်ပြေးသောအခါ, အိမ် humidifier ကိုပိတျထား-ပယ်လိမ့်မည်ဟုအလိုအလြောကျ။
SUPER တိတ်ဆိတ်: အရည်အသွေးမြင့် ultrasonic နည်းပညာတဲ့အခါမှာစစ်ဆင်ရေးအတွက် ultrasonic ပျံ့စူပါတိတ်ဆိတ်စေသည်။
အာမခံ: 12 လအာမခံများအတွက် Air ကို humidifier ။
အိတ်ဆောင်မြူခိုး Humidifier ရုပ်ပုံများ:
အိတ်ဆောင် Ultrasonic Humidifier စစ်ဆင်ရေး:
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Ultrasonic Humidifier လျှောက်လွှာ:
1. ပိုကောင်းအတွေ့အကြုံကိုများအတွက်ရေတွင်ပျော်ဝင်မရှိမဖြစ်ဆီကို ရွေးချယ်. ပေးပါ။
များစွာသောရေကိုရန် 2. နည်းနည်းခိုးအငွေ့ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ MAX လိုင်းကိုကျော်ရေ add ကြဘူးပါ။
3. ဒီတစ်ခုမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်သင်ကိုလည်း humidifier အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : မူလစာမျက်နှာ Humidifier
အကောင်းဆုံးလုံးမူလစာမျက်နှာအငွေ့ထုတ်စက် Humidifier 2017 အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဘောလုံးကို Shape အကောင်းဆုံးလုံးမူလစာမျက်နှာ Humidifier 2018 အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကောင်းဆုံးအဆိတ်ငြိမ်လုံးမူလစာမျက်နှာ Humidifier 2019 အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လီလီပန်းအိုးတိတ်ဆိတ်မူလစာမျက်နှာ ROOM တွင် Ultrasonic Humidifier အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
220ML မူလစာမျက်နှာ Humidifier Mini ကိုအိတ်ဆောင်ထုတ်ကုန်များ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မူလစာမျက်နှာ Humidifier ဆောင်းရာသီမှာတော့မြူခိုးအကောင်းဆုံး Cool အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြေတပြင်လုံးကိုနေအိမ်နေထိုင်မှု Humidifier ပစ်မှတ် Options ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
round Shape မူလစာမျက်နှာ Humidifier ကနေဒါဂျပန်အိန္ဒိယ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အိတ်ဆောင်မြူခိုး Humidifier အိတ်ဆောင် Ultrasonic Humidifier မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Ultrasonic Humidifier အိတ်ဆောင် Mini ကို Humidifier အိတ်ဆောင်မြူပျံ့ အိတ်ဆောင် USB Air ကို Humidifier ရနံ့ကုထုံ Cool မြူခိုး Humidifier စမတ်အခန်းတစ်ခန်း humidifier